Waa maxay boronkiito?Maxaase dhaliya boronkiitada? | Ilwareed.com Isha wararka iyo warbixinada Somalida oo dhan, iyo dhacdooyinka caalamka
Waa maxay boronkiito?Maxaase dhaliya boronkiitada?
Posted By ilwareed on Friday, November 16th 2012 11:02 EAT
Boronkiito waa infakshan ku dhaca carruurta ka yar 12 bilood. Badanaa wuxuu dhacaa jiilaalka (waqtiga qaboobaha) waana xaallad ka duwan
Maxaa dhaliya boronkiitada?
Boronkiitada waxaa dhaliya fayras waxyeelay-ya tuubooyinka neefsiga ee yaryar oo sanbabada. Sigaarka guriga lagu cabo ayaa noqon kara midsiyaadiya khatarta ah in carruurta ay ku dhacdo boronkiitada ama jirooyinka kale oo neefsiga la xiriira.
Jirradu waxay la bilaabataa hargabka. Maalin iyo wax la mid ah, ilmuhu wuxuu bilaabaa inuu qufaco neefsiguna wuxuu noqdaa mid degdeg ah xiiqina ku jirto. Dhibaatadani waxay u baahnaan kartaa in la dhigo
ilmaha isbitaal. Carruurta khatarta ugu jirta boronkiitada waxaa ka mid ah:
• Carrurta dhiciska ah, khaasatan kuwa qaba dhibaato xagga neefsiga.
• Carruurta wadnaha wax ka qabta.
• Carruurta aad u yaryar oo iinta ku dhalatay.
Sidee boronkiitada loo daweeyaa?
Daawadu ilmaha ma caawimayso maadaama ay tahay iinfakshanka fayraska.
Waxay u baahan yihiin inay nastaan. Waxay kaloo u baahan yihiin inay qaataan cabitaan badan. Sii naasnuujin isu dhowdhow laakiin muda
gaaban ah, ama qadar yar oo caana qasana ama biyo oo si isdaba jooga loo siiyo. Sidaan ilmahaagu ku daali mayo marka la quudinayo.
Carruurta yaryar ee boronkiitada qabtaa waxay badanaa jiranaadaan saddex ilaa shan berri, dabadeedna waxay ku bogsadaan shan ilaa toddoba berri. Qufaco wuxuu socon karaa laba ilaa saddex asbuuc.
Boronkiitadu waa cudur fida. Ka fogow in ilmahaagu la xiriiro carruur kale maalmaha u horreeya.
Meesha laga hello macluumaad intaas ka badan
• Kalkaaliyaha caafimaadka ee ilmaha iyo hooyada
• Isbitaalka xaafadaada qaybtiisa degdega ah.